သုံးသိန်းကိစ္စကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ ကိုရေမွန့်ကောင်မလေး ကေ – Maythadin
သုံးသိန်းကိစ္စကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ ကိုရေမွန့်ကောင်မလေး ကေ
May Thadin | June 28, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ …. မနေ့ညတုန်းက ကိုရေမွန်ရဲ့ ညီမလေး တင်ထားတဲ့ Myday က Screenshot နဲ့အတူ ပိုက်ဆံ သုံးသိန်း ကိစ္စက လူပြောများလာခဲ့တာပါတယ်နော်။
ပရိတိသတ်တွေကတော့ ဒီသုံးသိန်းက ကိုရေမွန်ရဲ့ကောင်မလေး K ပြန်တောင်းတာပါဆိုပြီး အရိပ်ပြအကောင်မြင်စွာနဲ့ ခံပြင်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖုန်းရောပြန်တောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ပရိတ်သတ်တွေကတော့ အကြောင်းအရာအတိအကျမပါတဲ့အတွက် တခြားကိစ္စလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဆိုပြီး ပြောခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ညတွင်းခြင်းမှာပဲ ကိုရေမွန်ကောင်မလေး K ကတော့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြန်လည်‌ဖြေရှင်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ထင်မြင်ချက်ပေးဖို့အတွက် Comment ပိတ်ထားတဲ့အတွက် ထပ်ပြီးဝေဖန်မှုတွေတိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
K ကတော့ “ကေ့ပိုက်ဆံလည်းမဟုတ်ပါဘူး အဲ့ ၃သိန်းက ကေလည်း မတောင်းမိပါဘူး။ တကယ့် လူရင်းတွေပါ ကေ့ ပေါ် အထင်လွဲ တာ သိရတော့ တကယ်စိတ်မကောင်းဘူး။ သိချင်ရင် လာမေးလို့ရပါတယ်။
အသံဖိုင်လည်း ရှိပါတယ်။ ဖုန်းတောင်းတယ်ဆိုတာလည်း သူ့ညီမလေးဆီက ၁ရက်ပဲတောင်းတာပါ နှစ်ယောက် ဓါတ်ပုံနဲ့ video လေး တွေကူးချင်လို့ပါ။
ရက်တောင်မလည်သေးဘူး ဒါမျိုးတွေ တောက်လျောက်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အခု ဒီကိစ္စမှာ အထင်လွဲသွားရင် အန်တီရော ညီမလေးရော band က သူတွေကော အကုန်လုံးကို ကေ အားနာပါတယ်” ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေး ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ဘယ်လိုတင်ထင်မိပါသလဲ။ ကိုယ့်အမြင်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားပါဦးနော်။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ …. မေန႕ညတုန္းက ကိုေရမြန္ရဲ႕ ညီမေလး တင္ထားတဲ့ Myday က Screenshot နဲ႕အတူ ပိုက္ဆံ သုံးသိန္း ကိစၥက လူေျပာမ်ားလာခဲ့တာပါတယ္ေနာ္။
ပရိတိသတ္ေတြကေတာ့ ဒီသုံးသိန္းက ကိုေရမြန္ရဲ႕ေကာင္မေလး K ျပန္ေတာင္းတာပါဆိုၿပီး အရိပ္ျပအေကာင္ျမင္စြာနဲ႕ ခံျပင္းေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဖုန္းေရာျပန္ေတာင္းတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္းထြက္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ပရိတ္သတ္ေတြကေတာ့ အေၾကာင္းအရာအတိအက်မပါတဲ့အတြက္ တျခားကိစၥလည္းျဖစ္နိုင္တာပဲဆိုၿပီး ေျပာခဲ့ၾကပါေသးတယ္။
ညတြင္းျခင္းမွာပဲ ကိုေရမြန္ေကာင္မေလး K ကေတာ့ ျပန္လည္ေျဖရွင္းတဲ့ ပို႔စ္တစ္ခုတင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပန္လည္‌ေျဖရွင္းတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ထင္ျမင္ခ်က္ေပးဖို႔အတြက္ Comment ပိတ္ထားတဲ့အတြက္ ထပ္ၿပီးေဝဖန္မႈေတြတိုးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
K ကေတာ့ “ေက့ပိုက္ဆံလည္းမဟုတ္ပါဘူး အဲ့ ၃သိန္းက ေကလည္း မေတာင္းမိပါဘူး။ တကယ့္ လူရင္းေတြပါ ေက့ ေပၚ အထင္လြဲ တာ သိရေတာ့ တကယ္စိတ္မေကာင္းဘူး။ သိခ်င္ရင္ လာေမးလို႔ရပါတယ္။
အသံဖိုင္လည္း ရွိပါတယ္။ ဖုန္းေတာင္းတယ္ဆိုတာလည္း သူ႕ညီမေလးဆီက ၁ရက္ပဲေတာင္းတာပါ ႏွစ္ေယာက္ ဓါတ္ပုံနဲ႕ video ေလး ေတြကူးခ်င္လို႔ပါ။
ရက္ေတာင္မလည္ေသးဘူး ဒါမ်ိဳးေတြ ေတာက္ေလ်ာက္ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ တကယ္စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ အခု ဒီကိစၥမွာ အထင္လြဲသြားရင္ အန္တီေရာ ညီမေလးေရာ band က သူေတြေကာ အကုန္လုံးကို ေက အားနာပါတယ္” ဆိုၿပီးေရးသားလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရး ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ဘယ္လိုတင္ထင္မိပါသလဲ။ ကိုယ့္အျမင္ေလးေတြကိုေျပာျပေပးသြားပါဦးေနာ္။
အဆိုတော်ရေမွန် ငှက်ဖျားရောဂါဖြင့် သေဆုံး
အဖိုး နဲ့ အဖေရဲ့သွေးတွေ အပြည့်ပါတာကြောင့်လွတ်မြောက်နယ်မြေထိ လိုက်လာပြီး တော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ သားအကြီး
နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖိုးလပြည့်နဲ့စုံတွဲပုံဟာ အကောင့် ဟက်ခံရတာမဟုတ်ဘဲ ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ သူမအပေါ် ဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိလည်း စမ်းသပ်ရုံပါပဲလို့ ဆိုလာတဲ့ အဆိုတော်ရေဗက္ကာဝင်း.
အရေးပေါ်လိုအပ်တာတွေအမြန်၀ယ်ဖို့ သိန်း ၅၀၀ လိုအပ်နေကြောင်း အရေးပေါ်အလှူခံနေတဲ့ ထားထက်ထက်